युवाहरु विदेशिनुमा कांग्रेस जिम्मेवारः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल « Bagmati Samachar
युवाहरु विदेशिनुमा कांग्रेस जिम्मेवारः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
३० चैत्र २०७५, शनिबार १५:५०
३० चैत । काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेशिनुमा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १५ले नयाँ बर्षको सन्र्दभमा शनिबार भुईंखेलमा गरेको कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता खनालले सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला नेपाली कांग्रेसले केही गर्न नसकेका कारण युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले हामी गर्छौं भनेर अहिले गफ लगाउनुभएको छ । तर ४६ साल पछाडि अवसर प्राप्त भएको हैन ? पटक–पटक बहुमत प्राप्त हुदा पनि तर के गर्नुभो ? सारा देशलाई गरिबी बनाउनु भयो । सारा देशलाई बेरोजगारीमा डुबाउनु भो । आज झण्डै ५० लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशमा जान बाध्य भईरहेका छन् । यो बाध्यता खडा गर्यो कसले ? नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई म एक पटक आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न भन्न चाहन्छु ।’
कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सभा स्वच्छ, हराभरा बनाउनका लागि विशेष अभियान सुरु गरिएको बताए ।
उनले सिसि क्यामेरा मार्फत अपराधिक गतिविधि मात्रै नभई नगरलाई फोहर बनाउनेहरुको पनि निगरानी गरिने र उनीहरुलाई फोटोसहित सार्वजनिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम महानगरले अघि सारेको बताए ।
कार्यक्रममा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले ढल निकास, खानेपानी, विद्युतलगायतलाई महानगर मातहत नराखेसम्म महानगरको सम्मुन्नत विकास गर्न नसकिने बताइन् ।
कार्यक्रममा नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद्लाई १२ लाख रुपैयाको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
वडा नम्बर १५ ले जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बार्षिक १२ लाख रुपैया दिने भएको हो ।
सोही कार्यक्रमको सुरुवात स्वरुप कार्यक्रममा दुई जना वृद्धवृद्धालाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो ।